Abathengisi beLipstick Tube neLip Gloss Tube | I-China Lipstick Tube & Lip Gloss Tube Abakhiqizi
Custom ezenziwe 50g frost ukhilimu ...
Impompo Easy for crimp amakha ...
Factory ngokwezifiso okunethezeka surly ...
Isitolo esidayisa yonke impahla uwoyela essentail bot ...
Inemibala yakudala yezinzipho pol ...
Uma i-lipstick tube ne-lip gloss tube yilokho okudingayo lapho usendaweni efanele. KwaNantong Global Packaging Products Co, Ltd. thina, lapha sikunikeza iqoqo elikhulu lamashubhu amahle angasetshenziselwa ukupakisha i-lipstick ne-lip gloss.Lezi amashubhu yizona ezingcono kakhulu zokupakisha ezithandekayo futhi ezinhle.
Inombolo enkulu yamashubhu e-lipstick namashubhu e-lip gloss ezintweni ezahlukahlukene, njenge-ABS, PP, PS, AS, PETG, ingilazi ne-aluminium. Okudingekayo kweKhasimende ngamasayizi, amakhono, imibala, izinto zokwakha nemiklamo zamukelekile. Ubuchwepheshe be-Surface buhlanganisa ukufafaza, i-electroplating, i-steaming, i-laser umbhalo, i-inlay, njll. I-oxidation yenqubo yokwelashwa kwe-aluminium surface. Ukuphrinta kwemidwebo kunokuphrinta kwesikrini, ukunyathela, ukuphrinta kwephedi, ukuphrinta kokudlulisa ukushisa, njll. Amalebula wephepha, ukuphrinta noma izitika zepulasitiki nakho kunikezwa.
Sine esiqinile izinga ukulawula lapho ukhiqiza. Umsebenzi weqembu lobungcweti kusuka ekwakhiweni, ukuthuthukiswa, ukukhiqizwa, ukuhlangana, ukupakisha nokuthunyelwa. Ngemuva kwensizakalo yokuthengisa, uma kunenkinga ethile mayelana nekhwalithi, sizokunikeza ukushintshwa kwenani elingalungile. Amasampula ngaphandle kwelogo eyenziwe ngokwezifiso mahhala, uma ungamukela impahla eqoqwe. Uma ufuna nge-logo eyenziwe ngezifiso, sizokhokhisa izindleko zabasebenzi kanye nezindleko zikayinki. Futhi imithwalo izoba ku-akhawunti yakho.
Sibambe isimiso esithi "ikhasimende kuqala, ikhwalithi kuqala" ukwanelisa imfuneko yamakhasimende eminingi. Njengabathengisi abaningi kanye nabakhiqizi beshubhu lipstick kanye ne-lip glass tube, ungathola intengo engcono kakhulu etholakala emakethe kwa-NTGP. Konke okumele ukwenze ukubeka i-oda ngobuningi nathi njengamanje ngaphandle kokungabaza okunye. Ukuklanywa okuhle kokuthinta nokuklama okuhle kungangeza ukubukeka kumashubhu akho futhi kukhuphule ukuthengisa kwakho.
Ithiphu encane, uma une-smidgen yelipstick esele eshubhu, uyihlanganise ne-petroleum jelly bese uyisebenzisa njenge-lip gloss.
Idizayini entsha engenalutho yomumo weshubhu lipstick
Isitayela esishisayo lipstick tube, lipstick bottle packing material
Isitsha sethubhu seLipstick sithandeka kahle imikhiqizo yokuthengisa eshisayo
Isikwele esingenalutho senziwe ngemibala yensimbi lip stick tube
Isitsha sokwakheka kombala ngokwezifiso isitsha sebhubhu se-lipstick esincane
Isitsha esiphansi se-lipstick tube ukufakwa kwepulasitiki esingenalutho se-lip balm
Ukupakisha okuphezulu okuphezulu okungenalutho kwe-lipgloss lip gloss
Izitsha zokuthengisa ezishisayo ezingenalutho ezicacile ze-lipgloss ngebhulashi
Eshibhile isitayela esilula ngokwezifiso seplastiki se-lipgloss esingenalutho
Ukupakisha okusha kwepulasitiki okungenalutho kwe-lip gloss tube nge-brush applicator
Round ecacile engenalutho lipgloss ikesi emaphaketheni
Sula ukupakisha amashubhu we-lipstick oketshezi olungenalutho wegolide ongenalutho